Nchịkọta Semalt - Ihe Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ntanetị kachasị mma
Ọ bụ otu n'ime mmemme ntinye weebụ kasị mma taa. Import.io na-enye onye wuru ya ma mepụta dataset gị site n'ịbịnye ozi sitere na ibe weebụ ma wepụ data ahụ na CSVs. Ọ dị mfe iwepu ọtụtụ narị mmadụ na ọtụtụ puku ebe nrụọrụ weebụ na blọọgụ na nkeji oge iji usoro a. Import.io na - eji teknụzụ na - ebu oke iji nweta ọtụtụ data na kwa ụbọchị, nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na nnukwu ụdị chọrọ. Usoro a na-abịa ma na free na ụgwọ nsụgharị na ike arụnyere na Mac, Linux na Windows mfe.
Ọ bụ ihe ọzọ na-emepụta ihe ntanetị dị ịtụnanya. Webhose.io na-enye anyị ohere ịnweta ozugbo, nhazi, na nhazi nke ọma. Ọ na-agbazi data a n'igwe ma na-akwado ihe karịrị narị asụsụ 200, na-echekwa data gị n'ụdị dị iche iche dị ka RSS, JSON, na XML..Ka m kwuo ebe a na Webhose.io bụ ngwa na-eme nchọgharị nke na-eji ozi naanị mgbe ị na-agba ma ọ bụ na-ewepu ibe weebụ gị.
CloudScrape na-enye nkwado maka ọtụtụ ndị ọrụ ma na-anakọta data site na ụdị ụdị saịtị ma ọ bụ blog. Ọ dịghị achọ nbudata ọ bụla; ọ pụtara na ị ghaghị ịkwụ ụgwọ maka mbipụta ya kachasị mma ma ziteere gị ozi ahụ site na email. Ịnwere ike ịchekwa data gị anakọtara ozugbo na ngwaọrụ nchekwa nchekwa igwe ma ọ bụ ihe nkesa gị. Ihe omume a na-akwado ma ọ bụ Google Drive na Box.net ma na-ebupụ dị ka JSON na CSV.
A maara nke ọma Scrapinghub maka nsụgharị ya na n'efu. Usoro nchịkọta weebụ a bụ ígwé ojii ma nyere aka wepụ ọtụtụ narị puku ibe weebụ kwa ụbọchị. Ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị a ma ama bụ Crawlera, Bot Counter Measure, na Crawl Builder. Scrapinghub nwere ike ịmegharị mkpokọta weebụ gị niile ka ọ bụrụ nke a haziri nke ọma ma chekwaa ya maka iji aka na-eme ihe na-akpaghị aka. Atụmatụ ahụ ga-efu gị gburugburu $ 30 kwa ọnwa.
VisualScraper bụ ihe ọzọ dị ịtụnanya nke ntinye weebụ nke a na-eji nakọta data site na narị otu narị na ọtụtụ puku saịtị. Usoro ihe a na-enyere aka wepu ma wepu ibe weebụ n'ime sekọnd. Ị nwere ike iji ma ọ bụ bufee peeji ndị dị iche iche dịka JSON, SQL, na XML. Ọ kachasị mara maka njirimara enyi-enyi ya, na atụmatụ ebighi ebi na-efu gị gburugburu $ 50 kwa ọnwa na ịnweta ihe karịrị 100k elu ibe weebụ Source .